Invisalign | Bvisa Aligners | Cape Town | Platinum Certified
CHOKWADI Kusingaonekwi Cape Town
Unogona Kunyemwerera Uine Ruvimbo. Yechokwadi Invisalign Yakatwasanuka 8 Mamirioni Nyemwerero uye Kuverenga! Iwe unogona kuve unotevera ... bhuku vhidhiyo yemahara kubvunza kuti uwane zvimwe nezve iyi inoshamisa yakajeka imwe nzira kune brace
Bhuka Yemahara Online Kubvunzana
Iyo Invisalign system ndiyo yepamusoro yepamusoro yakajeka aligner system munyika. Inotsigirwa nemakumi maviri emakore ekuvandudza, iyo Invisalign system yakabatsira kuunza kunyemwerera kune vanopfuura mamirioni mapfumbamwe vanhu kusanganisira vanopfuura mamirioni maviri evechidiki.
Orthodontics Aligners muSea Point, Cape Town, Chamhembe Afrika. OptiSmile ndiyo yekutanga mazino maitiro muAfrica kushandisa iTero scanner. Wakagara uchida meno akatwasuka, asi wanga uchitya kurwadziwa, kusagadzikana kwekudya, uye zvakare kuoneka kwe "tin grin"?
Kusiyana neyakajairika brace, Invisalign inobvumidza chaiyo kugadzirisa pane chaiwo mapfundo mumuromo mako pane kuisa kumanikidza pamazino ako ese aka "wired mukati". Pasi rese vanhu vanopfuura mamirioni masere vakaona kubatsirwa kweInvisalign yakajeka orthodontics vasina mabhureki. Iyo yakanaka, isina-invasive imwe nzira iyo inogona kuwana mhedzisiro nekukurumidza kupfuura zvakajairwa brace. Yakakwana ye vanhu vakuru uye kuyaruka izvo hazvidi zvetsika njanji njanji!
Sangana naDr Harris Smeyatsky
Isu tinodada nekuve nemasevhisi aDr Harris Smeyatsky uyo anoshanda kuUK uye kuOptiSmile! Akange ave chiremba anozivikanwa weInvisalign wemazino kweanenge makore gumi nemanomwe uye parizvino ndiye ega Invisalign Certified PLATINUM ELITE NZVIMBO nyanzvi muCape Town South Africa. MuJohannesburg kune mumwe chete anokwanisa kwazvo kupa.
Tarisa Harris chinyorwa muUK
Tarisa uone Harris inonyorwa muSouth Africa
Chii Chisingaratidzike Mari muKapa? Mutengo wematengo.
Invisalign Express ine kusvika pamatanho manomwe R20000
Haisati yavapo muSouth Africa. Musiyano wekutanga pakati peInvisalign Express ™ uye wenguva dzose Invisalign® kurapwa ndiyo nhamba yeanogadzirisa iwe yaunogamuchira. Neyechinyakare Invisalign® kurapwa, iwe unogashira akawanda aligners sezvaunoda, zvisinei, neInvisalign Express ™ kuburikidza neKujeka Kwakachena Brace, iwe uchagamuchira gumi aligners.
Invisalign Lite ine anosvika gumi nemana matanho Approx. R40000 kusvika R65000
Mhinduro yezviitiko zvakapusa zvinotora mwedzi minomwe. Misiyano mitatu mikuru pakati peInvisalign Yakazara neLite ndiwo mwero wekururamisa unogona kuzadzikiswa, inodiwa nguva yekurapwa, uye mutengo. Iwo aligners pachawo akafanana chaizvo.
Invisalign Comprehensive -unlimited nhanho R90000 kusvika R110000
Invisalign Comprehensive inoshandiswa kurapa akaomesesa mamiriro orthodontic. Paavhareji nguva yekurapwa inogona kutangira pamwedzi gumi nemisere kusvika gumi neshanu asi ichisiyana kubva pamunhu kuenda pamunhu sezvo munhu wega wega achigona kuverengerwa zvakasiyana manhamba evanofananidza kusimudzira kunyemwerera kwavo
Invisalign Teen R20000 kusvika R30000
Nevechiri kuyaruka panowanzo kuve nenguva yekukurumidza kuchinja shanduko kunoitika sezvavanokura. Invisalign Teen yakagadziridzwa kubatsira kugadzirisa idzi nyaya nezvimwe zvakakosha maficha.
Vivera Vanochengeta (Mushure meInvisalign) Approx. R3000 kusvika R6500
Vivera zvinochengeta ndeizvi: Zvakajeka uye zvisingaonekwe Tsika-yakagadzirirwa iwe Yakagadzirwa neiyo yakafanana mamiriro-e-iyo-hunyanzvi tekinoroji inoshandiswa kugadzira Invisalign® yakajeka aligners Zvishoma mukana wekutsemuka kana kutyoka kupfuura mamwe akajeka vanochengeta.
Metal Brace uye Wires (haina kuwanikwa kuOptiSmile) Approx. R35000
Ramba uchifunga kuti ingangoita 50% yemitero iri pamusoro ndeyechokwadi murabhorari fizi inobhadharwa kune Invisalign kugadzira aligners muUSA. OptiSmile inofanirwa kubhadhara $ 1700 USD inosvika ku $ 3000 USD mushure mekunge taraira aligners ako. Ndokusaka iwe uchibhadhara zvakanyanya kune chaiyo Invisalign.
Zvirongwa Zvekubhadhara pane Zviitiko zvisingaonekwi
Tinokutsvagisa neTero pakutanga kwako kubvunza
Tumira kune Invisalign R10000
Mari dzeLab R35000 yekuhodha aligners kubva kuUSA mushure meClincheck
Mwedzi Mwedzi R3000 kusvika kuR5000 zvichienderana nehurefu uye kuomarara
yakawanda sei isingaonekwe muCape Town
Akaenda mazuva esimbi esimbi uye kunyadziswa uye kuzvifunga kunouya navo. Invisalign Orthodontics aligners ichakubatsira iwe kuzadzisa kunyemwerera kwakanaka, pasina kupenya tambo dzinobuda mumuromo mako kwemakore maviri.
Invisalign Orthodontics Aligners Iwo Akakwana Zvakakwana Nekuti Iwo Aligners Ari:
Yakagadzirirwa iwe chete
Pakuvhiyiwa kwedu kwemazino muSea Point Cape Town, tinopa rubatsiro kuna Dr Harris Smeyatsky. Dr Harris vanozivikanwa muInvisalign system uye vapedza zviuru zviuru zvezviitiko muUK neSouth Africa. Yako yekutanga Invisalign kubvunza mahara uye isu tingave tichifara kuongorora zvaunogona kuita newe.
Isu tinokupa iwe rondedzero chaiyo yeizvo marapirwo aya anosanganisira uye yako mutengo nekukupa iwe yakazara yakazara yakanyorwa chirevo pasina chakavanzika mari.
Kana iyo Optismile Team yangosimbisa kuti unokodzera kurapwa, pakutanga kwako kusabhadharisa kubvunza, ivo vacharonga kushanya kwekutarisa kwavanozotora mifananidzo, X-ray uye kungave kwema digital scan kana mazino ekuratidza mazino ako kuitira gadzira chirongwa chekurapa cheClinCheck® 3D icho chakanyatsoenderana nezvako zvaunoda.
Iwo asingaonekwe mabhureki mutengo anosiyana sezvo wega murwere ane zvakasarudzika zvido. Iwe unogashira akateedzana etsika-akagadzirwa aligners ekupfeka. Izvi zvinofanirwa kupfekwa mazuva ese uye iwe unozogona kuzvishandura kumba, yega 1 - 2 mavhiki.
Dzvanya Photo kuti uone zvimwe
Yechokwadi Invisalign vs mamwe generic aligners vs brace
Ndezvipi zvisingaonekwi mabhureki?
Iwo akateedzana akajeka, angangoita asingaonekwe, aligners anobviswa ayo iwe aunoshandura vhiki mbiri dzese kune imwe nyowani. Aligner yega yega inogadzirirwa mazino ako. Sezvaunotsiva aligner yega yega, mazino ako anofamba - zvishoma nezvishoma, vhiki nevhiki - kudzamara vatwasanudza kunzvimbo yekupedzisira yakatemwa naOptiSmile. Kazhinji varwere vanozove pakati pe18 kusvika 30 aligners panguva yekurapwa kwavo.
Chimwe chinowedzerwa ndechekuti isu tine chaiyo yekurapa chirongwa icho chinoratidza iwo akateedzana mafambiro emazino ako achapfuura pamusoro penzira yekurapa. Izvi zvinokuratidza kumberi kuti mazino ako anotarisirwa kutaridzika sei pakupera kwekurapa. Kubva pamhedzisiro iyi, yako yakajairwa-yakagadzirwa, akajeka aligners anogadzirwa kunyanya iwe.
Invisalign ndiyo yakanakisa nzira yekushandura kunyemwerera kwako pasina kupindira muhupenyu hwako hwezuva nezuva uye inogona kushandiswa mukubatana nemamwe ma cosmetic mazino mhinduro, senge veneers kana mazino akanyanya kuremara kana kushanduka.
Ndezvipi Ndezvipi Zvikuru Zvikuru Zvekusaonekwa?
Invisalign yakanaka sarudzo yezvikonzero zvinotevera:
Invisalign yakajeka epurasitiki aligners, izvo zvinoita kuti ivo vakangwara. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuve nekuchinja kwakanyanya orthodontic shanduko pasina kunyanyo kuoneka.
Invisalign ine bhenefiti yekubviswa, zvichireva kuti unogona kuzviburitsa paunodya, kunwa kana kuchenesa meno ako, izvi zvinoreva kuti haurambidzwe maererano nezvaungadya iwe uchishandisa Invisalign.
Ivo havana simbi dzesimbi dzinogona kutsamwisa mukati memuromo uye haufanire kushandisa nguva yakawandisa kwachiremba wemazino sezvawaizoita neyakajairwa brace.
Iwe unenge uine zano rekuti mazino ako anotaridzika sei pakupera kwekurapa usati watombotanga, nekuda kwehunyanzvi hwekuona mazino tekinoroji, iyo inobatsirawo mukugadzirwa kweakasiyana mafuru.
Invisalign Inofananidzwa Sei Neyakajairika Braces?
Imwe yemabhenefiti akakosha pamusoro peyakajairwa brace ndeyekuti ine mashoma maitiro pahupenyu hwezuva nezuva. Sezvo maaligner akasununguka, iwe unofanirwa kuve nekuapfeka iwo ekurumbidzwa maawa makumi maviri nemaviri kusvika makumi maviri pazuva pasina kuyedza kukuru.
Iyo yekucheka-kumucheto nzira yekurapwa, inovimbisa kuti pane kushomeka kwekukanganiswa munzira yaunogara uye yakakosha, yakanaka maitiro pane ako maitiro uye manzwiro nezve iwe pachako. Ehezve kune zvimwe sarudzo kunze uko kwekutwasanudza mazino ako, asi hapana chinopa danho rerunyararo, nyore uye kuvimba kwaunowana neInvisalign.
Yakajeka, inenge isingaoneki Inoda waya & mabhureki
Inogadzikana yakatsetseka epurasitiki aligners Waya dzinogona kutsamwisa muromo
Aligners ari bvisika, nyore kuchenesa Kukwesha / kupurudzira kunonetsa
Hapana zvikafu zvinorambidzwa (Idya zvaunoda!) Zvibvumirano zvakawanda zvekudya
Paavhareji gumi nemaviri mwedzi, zvakadaro zvinosiyana kubva pamunhu Paavhareji pakati pemwedzi gumi nemasere kana makore maviri
Kurapa neInvisalign Kunorwadza Here?
Kusiyana neyakajairwa brace, kusagadzikana kwakabatana neiyo Invisalign system ishoma, nekuti kune njodzi shoma yekutsamwiswa newaya.
Kusagadzikana kunowanzoganhurirwa kune kutanga kwega kwega nhanho nyowani yekurapa. Vazhinji varwere vanotaura kumanikidzwa, chinova chiratidzo chekuti kurapwa kuri kushanda. Kudzvinyirira hakugone kugara kweanopfuura mazuva akati wandei mushure meimwe nongedzo nyowani.
Invisalign Simba Rokutaura Here?
Hazvishamise kurapwa kwema orthodontics kushandura kutaura zvishoma, asi muromo unogadzirisa nekukurumidza. Iwe unogona kutaura neine lisp shoma kwezuva kana maviri, asi rurimi runojairira kune zvarunogumira zvitsva nekukurumidza.
Pane Pane Zvinorambidza Pane Izvo Zvandinogona Kudya Ndiri Mukurapa?
Kwete. Kusiyana waya dzechivanhu uye mabhureki, iwe unogona kudya chero chaunoda paunenge uchirapwa nekuti iwe unobvisa aligners ako kuti udye nekumwa. Nekudaro, hapana chikonzero chekumanikidza mashandisiro ako chero ezvamunofarira zvekudya uye zvinwiwa. Zvakare, zvakakosha kuti iwe ugeze mazino ako mushure mekudya kwega kwega uye usati waisazve maaligners ako kuti uchengete hutsanana.
Ndedzipi Sarudzo Dziripo?
Invisalign inowanikwa kune vese vakuru nevachiri kuyaruka. Zvichida iwe waida kutwasanudza mazino ako kwechinguva ikozvino, kungave kuti uvandudze kunyemwerera kwako kune zvebhizinesi uye zvemagariro zvikonzero, kana kunyange chiitiko chakakosha sezuva rako remuchato. Asi iwe uri padanho muhupenyu hwako uko simbi dzesimbi hadzisi chete sarudzo yaunoda kufunga nezvayo. Kana kuti pamwe uri wechidiki kana mubereki wevechidiki ari kutsvaga mhinduro inoshanda asi yemazuva ano usinga zive kuzvishora.
Chero nzira, OptiSmile inogona kukupa mhinduro yakapusa asi inoshanda kuti uzadzise izvi pasina kumisikidza hupenyu hwako. NaInvisalign kana Invisalign Teen iwe uchave neyakareruka uye inochinjika yekurarama hupenyu hwako pasina matambudziko anosangana nemamwe marudzi ekurapa. Iyo aligners iri pachena uye yakaoma kuona kana yapfekwa, uye inokwanisa kubviswa kwenguva pfupi nzvimbo yenguva sechiitiko chakakosha.
Chii Chaunotarisira Kana Iwe Ukauya Ku Optismile
Bhuka yemahara pamhepo kubvunzana
Iyi inzira inokurumidza uye yakapusa yeku gauge kana Invisalign kurapwa kuchakwanira zvaunoda.
Dr. Harris Smeyatsky ndiye OptiSmile's asingaonekwe nyanzvi.
Dr.Harris anotanga nekurongedza zvakadzama chirongwa chekurapa uine zvibodzwa zvako mupfungwa. Chikamu chinonakidza cheInvisalign tekinoroji ndechekuti iye achakwanisa kukuratidzira dijitari 3D inomiririra mafambiro emeno ako panguva yekurapa.
Bata OptiSmile kubhuka yako yemahara Invisalign kubvunza. Iwe zvakare une sarudzo yekutibata nesu kuburikidza neWhatsApp kana email kana iwe uine chero mimwe mibvunzo yakanangana nezve kurapwa kwako.
Ona wongororo dzeseNyora kubvunzurudza